‘पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको कोलाहलमा फस्ने जोखिम छ’
अन्तर्वार्ता शेखर खरेल
‘पञ्चायती व्यवस्था गइसके पनि राजनीतिक दलहरू पञ्चायती शासन प्रणालीको केही उपलब्धि नक्कल गर्ने अभ्यास गरिरहेका देखिन्छन्। त्यसैले उपयुक्त विकेन्द्रीकरणको मोडल अपनाउन नेपाललाई अझ केही समय लाग्ने देख्छु।’
‘दलीय अधिनायकवादले स्वतन्त्र हुन दिएन’
हाम्रा वामपन्थीहरूले मार्क्स र लेनिनका शिक्षालाई पण्डित जस्तो भएर हेरे। आदर्शलाई धर्मस्वरूप माने। अहिलेको नेपालमा त्यो ठीक छ कि छैन भनेर हेरेनन्।
एमसीसीबाट छुटेको राष्ट्रवादको तीर
राष्ट्रवादका नाममा एमसीसी सम्झौता गिजोलिंदा नेपाली समाज विभाजित त भएको छ नै, यसका पराकम्प आउने दिनमा झन् ज्यादा देखिने प्रष्ट छ।
बतासले उघारिदिएका साँठगाँठ आज रेस्टुराँका नाममा नारायणहिटीको १४ रोपनी हडप्ने बतासले भोलि विश्वका राजखलक र राष्ट्राध्यक्ष बसेका अतिथि कक्षलाई ‘रोयल एक्सपेरियन्स’ भन्दै नबेच्ला?
'असल हिन्दूस्तान' नेपाल हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका निम्ति भारतभन्दा नेपाल पवित्र भूमि हुन सक्छ भन्ने सोचको उपज हो, दिव्योपदेशमा नेपाललाई ‘असिल हिन्दूस्थाना’ (असल हिन्दूस्तान) को उपमा दिइनु।
हारेर पनि शेखर कोइरालाले आर्जेको शक्ति सभापति पदमा पराजयका बावजूद नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनबाट शेखर कोइरालाको राजनीतिक उदयले उनी संस्थापन इतर र कोइराला विरासत दुवैका मूल खाँबो बनेका छन्।
के हो नेपालको अस्थिरताको कारण? नेपालको अस्थिरताको मूल बाह्य तत्व भारत देख्ने सिलवाल अस्थिरता मार्फत नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने चाहना भारतको रहेको देख्छन्। माओवादी नेताहरूलाई भारतमा आश्रय दिनुको मूल कारण यही भएको उनको तर्क छ। होइन भने, प्रजातान्त्रिक पद्धति नामेट गरेर कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको लक्ष्य के हुनसक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ।
'एकला चलो रे' राजनीति गन्ती र बिन्तीको मामिला नभई जोखिम अनि दुस्साहसको काम हो भन्ने कुरा माधव नेपालको पछिल्लो कदमले प्रदर्शन गरेको छ।
कविकुञ्जमाथि धावा! महाकवि देवकोटाको घर भत्काउनुअघि नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सुनुवाइ वा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गर्नुपर्नेमा महामारीका बीच धरोहर नामेट पारिनु दुर्भाग्य हो।
राजनीतिको 'ठेकेदारीकरण' राजनीतिको ठेकेदारीकरण रोक्न सर्वप्रथम त त्यो विकृतिको मुहान थुन्न सक्नुपर्छ। भोटलाई नोटसँग विनिमय गर्ने अवसर नै बन्द गर्न सकिए यस्तो विकृति ठूलो हदसम्म रोक्न सकिन्छ।
महाव्याधिको तेस्रो लहर रोक्ने हो भने... भाइरोलोजिस्ट तथा जनस्वास्थ्यविद्हरूले अनुमानित सय दिन आसपास कोभिड-१९ को तेस्रो लहर शुरू हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा यसबीचको समयलाई खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्ति आदिको व्यवस्थापनमा उपयोग गर्नुको विकल्प छैन।
देउवाको बाटो : गिरिजाप्रसाद बन्ने कि ओली? केपी शर्मा ओली झैं मेलमिलाप नभएर सर्वसत्तावादी र धोखाधडीको राजनीतिमा देउवा लाग्ने हो भने मुलुक संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न।
मेयर विद्यासुन्दरज्यू, नामले होइन कामले सुन्दर बन्नुस् काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक स्थलको सम्भार र सौन्दर्यकरणमा प्राथमिकता नदिएकाले ऊबाट अपेक्षा गर्ने कुरै रहेन। तर, कुनै सहृदयी र जिम्मेवार नागरिकले अनुमति लिएर शहरको सौन्दर्यमा पुर्‍याएको योगदान मेयर शाक्यलाई किन बिझायो, बुझिनसक्नु छ।
राजदूत नियुक्तिमा कहिलेसम्म खेलबाड? कूटनीतिक अनुभव तथा ज्ञान र क्षमता नहेरी चकलेट बाँडेसरि राजदूत पद बाँड्ने कामले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्किँदै आएको छ। निर्देशिका लत्याउँदै जो कोहीलाई राजदूत नियुक्त गर्ने हो भने भोलि नेपालका राजदूत हाँसोका पात्र नबन्लान् भन्न सकिन्न।
कसरी होला ओलीराजको अन्त्य?
पहिलो पटक झैं यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने सम्भावना देखिन्न। तर, आफ्नो स्वभावअनुसार फेरि पनि ओलीले सत्ता छाड्न आवश्यक ठान्ने छैनन्। त्यसैले यसपटक सम्मानित अदालतले ठीक–बेठीकको फैसला मात्र नगरेर बदनियतपूर्ण कृत्य गर्नेलाई सजाय पनि तोकिदिएपछि मात्र यो ‘दँस मकाब्र (मृत्यु नाच) को अन्त्य हुनसक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र 'कोल्याप्स' हुनबाट कसरी जोगाउने?
महामारीसँग लड्ने सरकारी संयन्त्रको नेतृत्व अदक्ष, अयोग्य, अनैतिकहरुको जिम्मा लगाएको सरकारले बल्लतल्ल एक सुयोग्य पात्र बालानन्द शर्मालाई सीसीएमसीको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
दोस्रो लहरको कहर विगतका कमजोरीबाट पाठ नसिक्ने र कोरोनालाई बेसार-पानी, अदुवा र अम्बाको पातका भरमा छाडिदिने हो भने आउने नयाँ वर्ष हाम्रा लागि भयावह हुने पक्का छ।